Storekeeper | Design Communications International Co, Ltd. ﻿
24.8.2020, အချိန်ပြည့် , Design / Decoration
ကုမ္ပဏီ: Design Communications International Co, Ltd.
• တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
• အသက် ၂၀ မှ ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။
• ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် အထက်ရှိရမည်။
• ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း နှင့် Interior Decoration ပစ္စည်းများသိသူဖြစ်ရမည်။
• ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကို Stock မှတ်နိုင်ရမည်။
• မြောက်ဒဂုံ နှင့် အနီးနေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။
အလုပ်တည်နေရာ Mingalar Street,Sanchaung Township,Yangon.
Company Industry: Design/Decoration
681 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Design / Decoration
•	Must have positive thinking, positive attitude & strong team-work mind-set
•	Good interpersonal, communication skill, Reporting skill •	well used in Microsoft office course •	Able to work outside Yangon or Travel if need.
•	Good interpersonal, communication skill, Reporting skill.
•	Site များ အတွက် အဝယ်ပစ္စည်းများ စာရင်းသွင်းပြုစုနိုင်ရမည်။ •	Site များအလိုက်အသုံးပြုလိုက်သောပစ္စည်းစာရင်းများ နှင့် လက်ကျန်စာရင်းများ ကိုစစ်ဆေးရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး သင်ယူချင်စိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Good Communication Skill, Reporting Skill, Interpersonal Skill. •	Problem Solving Skill & Manage to Job Site. •	Must have positive thinking, positive attitude & strong team-work mind-set.
Inventory Account Assistant
•	Site များ အတွက် အဝယ်ပစ္စည်းများ စာရင်းသွင်းပြုစုနိုင်ရမည်။ •	Site များအလိုက်အသုံးပြုလိုက်သောပစ္စည်းစာရင်းများ နှင့် လက်ကျန်စာရင်းများ ကိုစစ်ဆေးရမည်။ •	Purchaser မှ ဝယ်ယူပြီးသောစာရင်းများအကြွေးလက်ကျန်ရှိမရ ...
• မိမိလကျအောကျဝနျထမျးမြားကို ကောငျးစှာစီမံခနျ့ခှဲနိုငျရမညျ။ • တိကမြှနျကနျသော စာရငျးမြားကို အထကျအရာရှိအား တငျပွနိုငျရမညျ။
713 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Design / Decoration
714 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Design / Decoration
Storekeeper Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Design Communications International Co, Ltd. Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Design/Decoration မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Yangon Region 8 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 555 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 630 နေ့များ
Yangon Region 722 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 739 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 758 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 771 နေ့များ
Magway Region 799 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 804 နေ့များ